May | 2017 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
– တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဟွေလူမျိုး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ ရမ်ဇာန်ဥပုသ်လကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဖြန်သန်းကြလဲ၊ သူတို့ရဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တွေက ဘယ်လိုပုံစံလဲ၊ သူတို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို ဘယ်လိုတန်ဖိုးထားကြလဲ စတာတွေကို ဒီဗီဒီယိုအတိုလေးမှာ ရှုစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
“This Ramadan, don’t forget the plight of millions displaced by violence and conflict” said UN Refugees Chief
UNHCR, the UN Refugee Agency Ramadan message from UN Refugees Chief.·
DASSK need to order the Military to stop the battles in Ethnic Minority areas
Northern Alliance – Burma addedanew video.
ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့ ခြေထောက်ပြဿနာဖြစ်ဖို့ အန္တရာယ်အလွန်များပါတယ်။ အနာသေးသေးလေးမကျက်ရာကနေ အစပြုပြီး ရောဂါပိုးဝင်ကာ နောက်ဆက်တွဲ ခြေထောက်ဖြတ်ရတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ရင် အာရုံကြောပျက်စီးတာ၊ သွေးလှည့်ပတ်မှုပြဿနာနဲ့ ရောဂါပိုးဝင်ရောက်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ဒီအားလုံးဟာ ဆိုးရွားတဲ့ ခြေထောက်ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ အောက်ပါတချို့ဟာ ဆီးချိုရောဂါကြာင့်ဖြစ်တဲ့ ခြေထောက်ပြဿနာတွေပါ။
၁၃၅ မျိုးချစ်ပါတီ တည်ထောင်မယ်ဆိုသော မဘသ – ဝံသာနုရက္ခိတ မောင်သွေးချွန် ဆိုတာ ဘယ်လိုလူလဲ
The Red အနီ addedanew video.
အမုန်းစကား တားဆီးရေး ဆွေးနွေး ဟောပြောနေတာပါ
Ro Ahmad Zaw တယောက်မန့်ထားတာလေး ဖတ်စေချင်လို့…..
ပါမစ် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ကြုံတွေ့ချက်များ